COVID-१९ को प्रयोगशाला परिक्षण ः एक विवेचना | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य बैशाख १२ 2077 ekhabarnepal
डा. रूपेन्द्र श्रेष्ठ, पीएच डी, क्लिनिकल मोलिक्युलर जेनेटिसिस्ट पोष्ट–डोक, डिपार्टमेन्ट अफ जेनेटिक्स, अल्वर्ट आइन्स्टैन कलेज अफ मेडिसिन, न्युर्योक, अमेरिका
श्री. रामबहादुर खड्का, एम एस, क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट मेडिक्रस डायग्नोस्टिक प्रा.लि., बुटवल, नेपाल
हाल विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोबेल कोरोना(COVID-19) भाईरसको प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाल र नेपाली समुदायहरुमा अन्योल तथा भ्रमको अवस्था रहेको पाईन्छ । कोभिड-19 को परीक्षण गर्नको लागि राम्रो तालिम प्राप्त प्रयोगशालाकर्मी र सुबिधा सम्पन्न BSL2 / BSL3 वायोसेफ्टी क्याविनेट सहितको ल्याब आवश्यक छ । विश्वभरी प्रयोगमा आएको परीक्षण प्रविधि तथा परीक्षण शैली दुई प्रकारको छ । RDT र्यापिड diagnostic परीक्षण र पीसीआर अर्थात् (RT-PCR) real-time reverse transcription polymerase chain reaction. नेपालमा पनि यी दुई परिक्षण शैलीहरु प्रयोग भइरहेका छन, तर जनमानसमा यो प्रविधिको परिक्षण शैली र त्यसको रिपोटिङ्गमा सामान्य ज्ञानको अभाव भएको कारण यी जाँचहरुको चर्चा परिचर्चा सँगसँगै आलोचना पनि भएको पाईन्छ । ति भ्रमहरुलाई निवारण गर्नका लागि निम्नानुसार RDT र rRT-PCR सामान्य विश्लेषण गरिएको छ ।
यो antigen-antibody reaction सिद्धान्तमा आधारित परिक्षण हो । यसले बिरामीको blood serum/plasmaमा रहेका antigen /antibody दुबै परिक्षण गर्छ । RDT लाई antigen-based / antibody-based गरि दुइ भागमा बिभाजन गरिएको छ । Antigen-based RDT ले body fluid हरुमा रहेका viral protein परिक्षण गर्दछ । नेपालमा COVID-19 परिक्षणको लागि antibody-based RDT प्रयोग गरिएको छ, जसले antibody को पत्ता लगाउछ । Anti body-based RDT ले धेरै संख्यामा छिटो परिक्षण गर्नुको साथै लक्षण नदेखिएका र निको भइसकेकाहरु पनि छुट्याउँछ । त्यसैले RDT एउटा महत्वपुर्ण परिक्षण हो, यस सँगै rRT-PCR पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । RDTबाट मात्र संक्रमणको निश्चित गर्नु हुँदैन ।FDA बाट स्वीकृत मात्र च्म्त् हाल नेपालमा उपलब्ध नभएको हुँदा, भरपर्दो हुन नसक्ने चिन्ता गर्नु स्वभाविक हो ।
यो molecular technique हो । यसले बिरामीको नमुनामा भएको viral nucleic acid पत्ता लगाउँछ । जसको लागि nasopharyngeal अथवा oropharyngeal swabs, sputum, bronchoalveolar lavage, र nasopharyngeal aspirate अथवा nasal aspirate प्रयोग गरिन्छ । rRT-PCRtechnique ले coronavirusको RNA परिक्षण गर्दछ । कोरोनाभाइरस संक्रमण परीक्षणको लागि N, E, S / RdRP genes हरु लक्षित गरिएको छ .
नेपालको राष्ट्रिय जन–स्वास्थ्य प्रयोगशालाdf खासगरीE / RdRP genes लक्षित गरिएको छ . यसबाट गरिएको परिक्षणले COVID-19 को संक्रमण भए नभएको पुष्टि गर्छ । नमुना संकलन गर्ने तरिका,समय, जाच्ने उपकरण र परीक्षण गर्ने व्यक्तिको शिपले यसको नतिजालाई प्रभाब पार्न सक्छ ।
RDT र rRT-PCR प्राप्त हुन सक्ने नतिजा र त्यसको महत्वलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैले यो महामारिको बेलामा rRT-PCR नै COVID-19 को प्रयोगशाला परिक्षणको मुख्य हतियार हुन सक्छ । तर antibody-based RDT प्रविधिबिना लक्षणका बिरामीहरु र पहिलेका संक्रमितहरु छुट्टयाउन सहयोगी हुन्छ । तसर्थ RDT / rRT-PCR च्दुवै परिक्षण प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर नै COVID-19 भाईरसको उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्न सकिन्छ । अन्तमा WHO, CDC र FDA ले स्वीकृत गरेको तथा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगशाला परिक्षण सामग्री मगाउनेमा नेपाल सरकारको सधै ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्छ ।